Instagram နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့
1. Instagram မှာ Two-Factor Authentication ကို Enable လုပ်ခြင်း
Two-factor authentication ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ account ကို ပိုမို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Two-
factor authentication ဟာ ကိုယ့် account ရဲ့ password ကို အခြားတစ်ယောက်က သိနေရင်တောင် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့အတွက် Tablet, Mobile အစရှိတာတွေကနေ လက်ခံရရှိမယ့် code number ကို ထည့်မသွင်းမချင်း log in ပြုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Instagram account မှာ Two-factor authentication ကို enable လုပ်ပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Instagram app ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Profile icon ကို နှိပ်ပါ။
Profile icon ကို နှိပ်ပြီးရင် ညာဘက်ထောင့် အပေါ်နားမှာ စက်သွားပုံစံနဲ့ options ဆိုတာကို တွေ့ရပါမယ်။ Options ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်းနံပါတ်မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင် Edit Profile ဆိုတာကို ရွေးရပါမယ်။ Edit Profile ထဲကမှ Private Information ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိုဘိုင်းကို ရွေးပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပြီးရင် Confirmation code ကို ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းနံပါတ် ထည့်သွင်းတဲ့ အဆင့်ပြီးသွားရင် Options ထဲကို ပြန် သွားပြီး Two-factor authentication ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Require Security Code ဆိုတဲ့ toggle ကိုOnပေးပြီး Turn On ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် confirmation code လှမ်းပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ code ဖြစ်တဲ့ ဂဏန်းခြောက်လုံးကို ဖြည့်ပေးပြီး Done ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ confirmation code တွေ မပို့ဘူးဆိုရင် backup code တွေကို screenshot လုပ်ပြီးသိမ်းထား နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Instagram မှာ two-factor authentication ကို enable လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
(2) Instagram က ကိုယ့်ရဲ့ Live Video ကို သိမ်းဆည်းခြင်း
အသစ်ဖြန့်ချိပေးလိုက်တဲ့ Instagram update မှာ ကိုယ်လွှင့် တင်ထားတဲ့ Live video ကို သိမ်းဆည်းဖို့အတွက် feature အသစ် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Instagram version 10.12 မှာ Live video တွေကို ထုတ်လွှင့်ပြသလို့ ပြီးဆုံးတာနဲ့ ဗီဒီယိုကို တစ်ခါတည်း သိမ်းဆည်းမှာလား ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမယ့် feature ပါဝင်လာပါတယ်။
အရင်က Live လွှင့်တယ်ဆိုရင် Instagram Store မှာ Live အနေနဲ့ ပြသနေပြီး ထုတ်လွှင့်မှု ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ app ထဲမှာ မကျန်ရှိတော့ပါဘူး။ အသစ်ဖြန့်ချိပေးလိုက်တဲ့ update မှာတော့ ကိုယ် Live လွှင့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်မှု ပြီးသွားတဲ့
အခါမှာ ညာဘက်ထောင့်အပေါ်ဘက်မှာ save ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုဖော်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ save ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို camera roll ထဲမှာ ဗီဒီယိုဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(3) Snapchat က Snap တွေကို Instagram Stories ပေါ်ကို တင်ခြင်း
Snapchat stories နဲ့ Instagram stories တို့ဟာ အလွန်ဆင်တူတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Snapchat ပုံမှန်သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ Snapchat မှာ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို Instagram Stories မှာ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Snapchat က snap တစ်ခုကို Instagram stories ပေါ်မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ပထမဆုံး Snapchat မှာ snap တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ Snap တစ်ခု ဖန်တီးပြီးရင် ဘယ်ဘက်အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ save button ကို နှိပ်ပါ။
Save ပြုလုပ်ပြီးရင် snap ရဲ့ အပေါ်ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ “ X ” button ကိုနှိပ်ပြီး snap ကနေ ထွက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် shutter button ရဲ့အောက်ခြေနားမှာ memories ဆိုတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကို memories မှာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံကိုနှိပ်ပြီး swipe လုပ်လိုက်ရင် အောက်ခြေမှာ export ရယ် delete ရယ် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Export button ကို နှိပ်ပါ။ Export လုပ်လိုက်ရင် ပုံကို iPhone မှာဆိုရင် Camera roll အောက်မှာ သိမ်းဆည်းပေးထားပါလိမ့်မယ်။
Instagram Stories မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် Instagram app ကိုဖွင့်ပြီး အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Your Story ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ကင်မရာ
နေရာမှာ swipe လုပ်လိုက်ရင် Camera roll က ပုံတွေကို တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် Snapchat ကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံကို ရွေးယူပြီး Instagram stories မှာတင်နိုင်ပါပြီ။
(4) Instagram မှာ Block ထားတဲ့သူကို Unblock ပြုလုပ်ခြင်း
Instagram မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအချိန်တစ်ခုထိ block ထားပြီး unblock ပြန်လုပ်ချင်ရင် အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို block ထားလိုက်ရင်တော့ အဲဒီသူရဲ့ Profile, Posts နဲ့ သူတင်သမျှတွေကို မြင်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ block လုပ် ထားမိတဲ့သူကို unblock ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးဖုန်းထဲက Instagram app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ မြင်ကွင်းညာဘက်ထောင့်နားက Profile ဆိုတဲ့ icon ပုံလေးကို ထည့်လိုက်ပါ။
Profile ထဲကို ရောက်သွားရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ကွင်းရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက အစက်သုံးခုဆင့်ထားတဲ့ icon ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
အဲလိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ Options စနစ်ထဲကို ရောက်သွားပါ လိမ့်မယ်။ Options စနစ်ထဲမှာ Blocked Users ဆိုတဲ့စာသားကိုရှာပြီး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Blocked Users ဆိုတဲ့ စာသားကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ မိမိ block ထားတဲ့သူကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မိမိအနေနဲ့ unblock ပြန် လုပ်ချင်တဲ့ သူကို ရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိ unblock လုပ်မယ့် သူရဲ့ profile ဘေးနားက Unblock ဆိုတဲ့ စာသားပါတဲ့ ခလုတ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Unblock ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ unblock လုပ်မှာ သေချာလားဆိုတဲ့ အသိပေးချက် ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ Yes, I’m sure ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မိမိအနေနဲ့ block ထားတဲ့သူကို unblock ပြု လုပ်ပြီးအရင်အတိုင်း ပြန်ဆက်သွယ်လို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
(5) Instagram ရဲ့ ရှာဖွေ မှုအကြံပြုချက်တွေ ရှင်းလင်းခြင်း
Instagram ရဲ့ ရှာဖွေမှု အကြံပြုတွေက မိမိအတွက် သုံးရတာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရင်တော့ ခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းအတိုင်း ရှင်းလင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ပုံမှန်တူညီတဲ့ ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ရှာဖွေအကြံပြုချက်တွေကို မရှင်းသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖုန်းသုံးပြီးရှာဖွေတဲ့ အခါမှာ ရှာဖွေဆိုင်ရာအကြံပြုချက်က ဖုန်းရဲ့ သေးငယ်ပြီး စာရိုက်ရတာ ခက်ခဲမှုကို အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ရဲ့ ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်ကို ရှင်းလင်းဖို့အတွက် အရင်ဆုံးဖုန်းထဲကနေ Instagram app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Profile icon ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Profile ထဲကို ရောက်သွားပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ မြင်ကွင်းရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက အစက်သုံးခုဆင့်ထားတဲ့ menu icon ကို နှိပ်ပါ။
iPhone သုံးတဲ့ သူတွေဆိုရင် တော့ Options စနစ်ထဲကို သွားဖို့အတွက် Cog icon လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ icon ကို နှိပ်ပါ။
Menu ဒါမှမဟုတ် Cog icon ကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ Instagram Options စနစ်ထဲကို ရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ Options စနစ်ထဲ ရောက်သွားရင်တော့ Clear Search History ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Clear Search History ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ ဖျက်မှာသေချာလားဆိုတဲ့ စာသားတစ် ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး မိမိအနေနဲ့ ရှင်းလင်းပစ်မှာသေချာတဲ့အတွက် Yes, I’m sure ဆိုတဲ့ စာသားကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
အဲလိုရှင်းလင်းပစ်လိုက်ရင်တော့ နောက်ထပ် Instagram မှာ ရှာဖွေရင် ရှာဖွေမှုအကြံပြုချက်တွေ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
1. Instagram မှာ Two-Factor Authentication ကို Enable လုပျခွငျး
Two-factor authentication ဟာ ကိုယျ့ရဲ့ account ကို ပိုမို လုံခွုံစိတျခစြှာ အသုံးပွုနိုငျစမေယျ့ service တဈခုဖွဈပါတယျ။ Two-
factor authentication ဟာ ကိုယျ့ account ရဲ့ password ကို အခွားတဈယောကျက သိနရေငျတောငျ ဖုနျးနံပါတျနဲ့ ခြိတျဆကျ ထားတဲ့အတှကျ Tablet, Mobile အစရှိတာတှကေနေ လကျခံရရှိမယျ့ code number ကို ထညျ့မသှငျးမခငျြး log in ပွုလုပျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
Instagram account မှာ Two-factor authentication ကို enable လုပျပွီး အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျ Instagram app ကိုဖှငျ့ပါ။ ပွီးရငျ Profile icon ကို နှိပျပါ။
Profile icon ကို နှိပျပွီးရငျ ညာဘကျထောငျ့ အပျေါနားမှာ စကျသှားပုံစံနဲ့ options ဆိုတာကို တှရေ့ပါမယျ။ Options ကို နှိပျလိုကျပါ။
ဖုနျးနံပါတျမထညျ့ရသေးဘူးဆိုရငျ Edit Profile ဆိုတာကို ရှေးရပါမယျ။ Edit Profile ထဲကမှ Private Information ဆိုတဲ့နရောမှာ မိုဘိုငျးကို ရှေးပွီး ဖုနျးနံပါတျကို ထညျ့သှငျးပေးရပါမယျ။ ဖုနျးနံပါတျကို ထညျ့သှငျးပွီးရငျ Confirmation code ကို ပို့ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဖွညျ့ပေးလိုကျပါ။
ဖုနျးနံပါတျ ထညျ့သှငျးတဲ့ အဆငျ့ပွီးသှားရငျ Options ထဲကို ပွနျ သှားပွီး Two-factor authentication ကို နှိပျပါ။
ပွီးရငျ Require Security Code ဆိုတဲ့ toggle ကိုOnပေးပွီး Turn On ဆိုတာကို နှိပျပါ။
ဒါဆိုရငျ confirmation code လှမျးပို့ပေးပါလိမျ့မယျ။ အဆိုပါ code ဖွဈတဲ့ ဂဏနျးခွောကျလုံးကို ဖွညျ့ပေးပွီး Done ကို နှိပျလိုကျပါ။
တကယျလို့ confirmation code တှေ မပို့ဘူးဆိုရငျ backup code တှကေို screenshot လုပျပွီးသိမျးထား နိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ Instagram မှာ two-factor authentication ကို enable လုပျပွီးပွီဖွဈပါတယျ။
(2) Instagram က ကိုယျ့ရဲ့ Live Video ကို သိမျးဆညျးခွငျး
အသဈဖွနျ့ခြိပေးလိုကျတဲ့ Instagram update မှာ ကိုယျလှငျ့ တငျထားတဲ့ Live video ကို သိမျးဆညျးဖို့အတှကျ feature အသဈ ထညျ့သှငျးပေးလိုကျပါတယျ။ Instagram version 10.12 မှာ Live video တှကေို ထုတျလှငျ့ပွသလို့ ပွီးဆုံးတာနဲ့ ဗီဒီယိုကို တဈခါတညျး သိမျးဆညျးမှာလား ဆိုတာကို ဖျောပွပေးမယျ့ feature ပါဝငျလာပါတယျ။
အရငျက Live လှငျ့တယျဆိုရငျ Instagram Store မှာ Live အနနေဲ့ ပွသနပွေီး ထုတျလှငျ့မှု ပွီးဆုံးသှားတဲ့အခါမှာ ဗီဒီယိုဖိုငျဟာ app ထဲမှာ မကနျြရှိတော့ပါဘူး။ အသဈဖွနျ့ခြိပေးလိုကျတဲ့ update မှာတော့ ကိုယျ Live လှငျ့လိုကျတဲ့ ဗီဒီယိုကိုထုတျလှငျ့မှု ပွီးသှားတဲ့အခါမှာ ညာဘကျထောငျ့အပျေါဘကျမှာ save ဆိုတဲ့ ခလုတျကိုဖျောပွ ပေးပါလိမျ့မယျ။ အဆိုပါ save ဆိုတဲ့ ခလုတျကို နှိပျလိုကျရငျ ဗီဒီယိုဖိုငျကို camera roll ထဲမှာ ဗီဒီယိုဖိုငျအနနေဲ့ သိမျးဆညျးပေးနိုငျမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ပွနျလညျ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(3) Snapchat က Snap တှကေို Instagram Stories ပျေါကို တငျခွငျး
Snapchat stories နဲ့ Instagram stories တို့ဟာ အလှနျဆငျတူတဲ့ feature တဈခုဖွဈပါတယျ။ Snapchat ပုံမှနျသုံးစှဲသူမြားအနနေဲ့ Snapchat မှာ ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးထားတဲ့ ပုံတဈပုံကို Instagram Stories မှာ အသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျ ဖျောပွပါနညျးလမျးအတိုငျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Snapchat က snap တဈခုကို Instagram stories ပျေါမှာ အသုံးပွုဖို့အတှကျ ပထမဆုံး Snapchat မှာ snap တဈခုပွုလုပျပါ။ Snap တဈခု ဖနျတီးပွီးရငျ ဘယျဘကျအောကျခွနေားမှာရှိတဲ့ save button ကို နှိပျပါ။
Save ပွုလုပျပွီးရငျ snap ရဲ့ အပျေါဘယျဘကျထောငျ့မှာရှိတဲ့ “ X ” button ကိုနှိပျပွီး snap ကနေ ထှကျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ shutter button ရဲ့အောကျခွနေားမှာ memories ဆိုတာကို တှရေ့ပါမယျ။ ဖနျတီးထားတဲ့ပုံကို memories မှာ တှရေ့ပါမယျ။ အဲ့ဒီပုံကို နှိပျလိုကျပါ။
ပုံကိုနှိပျပွီး swipe လုပျလိုကျရငျ အောကျခွမှော export ရယျ delete ရယျ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ Export button ကို နှိပျပါ။ Export လုပျလိုကျရငျ ပုံကို iPhone မှာဆိုရငျ Camera roll အောကျမှာ သိမျးဆညျးပေးထားပါလိမျ့မယျ။
Instagram Stories မှာ အသုံးပွုဖို့အတှကျ Instagram app ကိုဖှငျ့ပွီး အပျေါဘကျမှာရှိတဲ့ Your Story ကို နှိပျပါ။ ပွီးရငျ ကငျမရာ
နရောမှာ swipe လုပျလိုကျရငျ Camera roll က ပုံတှကေို တှရေ့ပါ လိမျ့မယျ။ ဒါဆိုရငျ Snapchat ကနေ ဖနျတီးထားတဲ့ ပုံကို ရှေးယူပွီး Instagram stories မှာတငျနိုငျပါပွီ။
(4) Instagram မှာ Block ထားတဲ့သူကို Unblock ပွုလုပျခွငျး
Instagram မှာ တဈစုံတဈယောကျကိုအခြိနျတဈခုထိ block ထားပွီး unblock ပွနျလုပျခငျြရငျ အလှယျတကူ လုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို block ထားလိုကျရငျတော့ အဲဒီသူရဲ့ Profile, Posts နဲ့ သူတငျသမြှတှကေို မွငျတှရေ့တော့မှာမဟုတျပါဘူး။ block လုပျ ထားမိတဲ့သူကို unblock ပွနျလုပျမယျဆိုရငျတော့ အောကျပါ နညျးလမျးအတိုငျး ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံးဖုနျးထဲက Instagram app ကို ဖှငျ့လိုကျပါ။
ပွီးရငျတော့ မွငျကှငျးညာဘကျထောငျ့နားက Profile ဆိုတဲ့ icon ပုံလေးကို ထညျ့လိုကျပါ။
Profile ထဲကို ရောကျသှားရငျတော့ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး မွငျကှငျးရဲ့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့နားက အစကျသုံးခုဆငျ့ထားတဲ့ icon ကို တဈခကျြနှိပျပါ။
အဲလိုနှိပျလိုကျရငျတော့ Options စနဈထဲကို ရောကျသှားပါ လိမျ့မယျ။ Options စနဈထဲမှာ Blocked Users ဆိုတဲ့စာသားကိုရှာပွီး တဈခကျြနှိပျလိုကျပါ။
Blocked Users ဆိုတဲ့ စာသားကိုနှိပျလိုကျရငျတော့ မိမိ block ထားတဲ့သူကို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ မိမိအနနေဲ့ unblock ပွနျ လုပျခငျြတဲ့ သူကို ရှေးပွီးနှိပျလိုကျပါ။
အဲဒါဆိုရငျတော့ မိမိ unblock လုပျမယျ့ သူရဲ့ profile ဘေးနားက Unblock ဆိုတဲ့ စာသားပါတဲ့ ခလုတျပျေါလာမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ Unblock ဆိုတဲ့ ခလုတျကိုတဈခကျြနှိပျပါ။
ဒါဆိုရငျတော့ unblock လုပျမှာ သခြောလားဆိုတဲ့ အသိပေးခကျြ ပျေါလာမှာဖွဈပါတယျ။ သခြောတယျဆိုရငျတော့ Yes, I’m sure ကို နှိပျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ မိမိအနနေဲ့ block ထားတဲ့သူကို unblock ပွု လုပျပွီးအရငျအတိုငျး ပွနျဆကျသှယျလို့ ရပွီဖွဈပါတယျ။
(5) Instagram ရဲ့ ရှာဖှေ မှုအကွံပွုခကျြတှေ ရှငျးလငျးခွငျး
Instagram ရဲ့ ရှာဖှမှေု အကွံပွုတှကေ မိမိအတှကျ သုံးရတာ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈတယျလို့ ထငျရငျတော့ ခုဖျောပွပေးမယျ့ နညျးလမျးအတိုငျး ရှငျးလငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိအနနေဲ့ ပုံမှနျတူညီတဲ့ ရှာဖှမှေုတှေ လုပျလရှေိ့တဲ့ သူဆိုရငျတော့ ရှာဖှအေကွံပွုခကျြတှကေို မရှငျးသငျ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖုနျးသုံးပွီးရှာဖှတေဲ့ အခါမှာ ရှာဖှဆေိုငျရာအကွံပွုခကျြက ဖုနျးရဲ့ သေးငယျပွီး စာရိုကျရတာ ခကျခဲမှုကို အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့ လုပျဆောငျခကျြဖွဈလို့ ဖွဈပါတယျ။
Instagram ရဲ့ ရှာဖှမှေုဆိုငျရာ အကွံပွုခကျြကို ရှငျးလငျးဖို့အတှကျ အရငျဆုံးဖုနျးထဲကနေ Instagram app ကို ဖှငျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ Profile icon ကို တဈခကျြနှိပျလိုကျပါ။
Profile ထဲကို ရောကျသှားပါမယျ။ ပွီးရငျတော့ မွငျကှငျးရဲ့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့နားက အစကျသုံးခုဆငျ့ထားတဲ့ menu icon ကို နှိပျပါ။
iPhone သုံးတဲ့ သူတှဆေိုရငျ တော့ Options စနဈထဲကို သှားဖို့အတှကျ Cog icon လို့ချေါတဲ့ အောကျကပုံမှာ ပွထားတဲ့ icon ကို နှိပျပါ။
Menu ဒါမှမဟုတျ Cog icon ကို နှိပျလိုကျရငျတော့ Instagram Options စနဈထဲကို ရောကျသှားဖွဈပါတယျ။ Options စနဈထဲ ရောကျသှားရငျတော့ Clear Search History ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပျလိုကျပါ။
Clear Search History ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပျလိုကျရငျတော့ ဖကျြမှာသခြောလားဆိုတဲ့ စာသားတဈ ခုပျေါလာမှာဖွဈပွီး မိမိအနနေဲ့ ရှငျးလငျးပဈမှာသခြောတဲ့အတှကျ Yes, I’m sure ဆိုတဲ့ စာသားကို ရှေးပေးလိုကျပါ။
အဲလိုရှငျးလငျးပဈလိုကျရငျတော့ နောကျထပျ Instagram မှာ ရှာဖှရေငျ ရှာဖှမှေုအကွံပွုခကျြတှေ ပျေါလာမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။